Fijirihana sy Pentestana: Ampifanaraho amin'ity faritra IT ity ny GNU / Linux Distro anao Avy amin'ny Linux
Na dia ny ny fanapahana tsy voatery ho sehatry ny solosaina, ny pentesting raha tanteraka izany. Ny ny fanapahana na maha-a HackerRaha ny tokony ho izy dia teny ankapobeny io, izay matetika mifandray bebe kokoa amin'ny fomba fisainana sy fomba fiaina. Na dia amin'izao vanim-potoana maoderina izao aza izay ifandraisan'ny zava-drehetra Sehatra IT, lojika ny mieritreritra fa a Hacker Is a manam-pahaizana momba ny solosaina amin'ny natiora na amin'ny fianarana matihanina.
Na izany aza, ny teny pentesting na ho a Pentester, raha zavatra mifandraika mazava aminy Sehatra IT, omena ny fahalalana, ny fifehezana ary ny fampiasana ilaina ny fampiharana solosaina manokana sy mandroso, miompana indrindra amin'ny lohahevitra momba ny fiarovana an-tserasera sy ny forensika amin'ny solosaina.
Alohan'ny hidirantsika tanteraka amin'ilay lohahevitra, dia mamporisika anao izahay hamaky zavatra vita an-tsoratra 7 mifandraika, 4 amin'ny fampiasana mandroso ny GNU / Linux amin'ny faritra IT hafa ary ny 3 amin'ny lohahevitra ankehitriny, izany hoe, ny lohahevitra Mpijirika / mpijirika, mba hamenoana ny vakiteny manaraka ary hisorohana azy tsy ho lehibe loatra.
Ireto boky manaraka ireto mifandraika amin'ny fampiasana mandroso ny GNU / Linux Izy ireo dia:
Ary ireto boky manaraka ireto mifandraika amin'ny Fanapahana hacking / Hacker Izy ireo dia:
Inona no tena dikan'ny "mpijirika"
Fampiharana hacking sy fiarovana 11 ambony ho an'ny Linux
1 Fijirihana sy Pentestana: saha mahaliana IT
1.1 Fijirika sy mpijirika
1.2 Pentest sy Pentester
2 Ahoana ny fomba fanamboarana ny Distro GNU / Linux amin'ny sehatry ny IT amin'ny fanapahana sy ny Pentest?
2.1 GNU / Distros Linux ho an'ny fanapahana sy ny fiompiana an-tsokosoko
2.2 Manafatra GNU / Linux Distros Repositories ho an'ny hacking sy Pentesting
Fijirihana sy Pentestana: saha mahaliana IT
Hanazava ny teny etsy ambany izahay Fanapahana / mpijirika ary ny teny Pentesting / Pentester avy eo handroso miaraka amin'ireo torohevitra sy tolo-kevitra ilaina hamaliana ny fanontanian'i: Ahoana ny fomba fanamboarana ny Distro GNU / Linux amin'ny sehatry ny IT amin'ny fanapahana sy ny Pentest?
Fijirika sy mpijirika
Ny fahaiza-miteny amin'ny solosaina, famaritana azo ekena sy amin'ny ankapobeny ny fanapahana es:
"Ny fikarohana maharitra amin'ny fahalalana amin'ny zava-drehetra mifandraika amin'ny rafitry ny solosaina, ny rafitra fiarovana, ny fahalemeny, ny fomba fanararaotana ireo fahalemena ireo sy ireo rafitra hiarovana ny tenany amin'ireo izay mahalala ny fomba hanaovana azy". Fanapahana, fanapahana ary famaritana hafa
Vokatr'izany, a Hacker IT dia olona iray izay:
"Mirona amin'ny fampiasana tsy azo ihodivirana ary manjaka amin'ny TIC, hahazoana fidirana mahomby sy mahomby amin'ny loharanom-pahalalana sy ny rafitra fanaraha-maso misy (sosialy, politika, toekarena, kolontsaina ary teknolojia) hanao ny fanovana ilaina ho tombontsoan'ny rehetra.". Ny hetsika hacker: fomba fiaina sy rindrambaiko maimaimpoana
Pentest sy Pentester
Mandritra izany fotoana izany izy pentesting azo fintino mazava toy ny:
"Ny hetsika na ny hetsika fanafihana rafitra informatika hahafantarana ireo tsy fahombiazana, fahalemena ary lesoka hafa amin'ny fiarovana, mba hisorohana ny fanafihana ivelany. Ankoatr'izay, ny Pentesting dia endrika hacking tokoa, io fanao io ihany no ara-dalàna, satria manana ny faneken'ny tompona fitaovana hosedraina izy io, ankoatry ny fikasana ny hanimba tena.". Inona no atao hoe pentesting ary ahoana no mamantatra sy misoroka ny fanafihana cyber?
Noho izany, a Pentester azo faritana ho toy izany olona izany:
"Ny asan'iza dia ny fanarahana dingana maromaro na dingana manokana izay miantoka ny fandinihana tsara ary amin'izay dia afaka manao ny fanadihadiana rehetra momba ny tsy fahombiazana na ny fahalemena ao amin'ny rafitra. Noho izany dia antsoina matetika hoe Cyberecurity Auditor izy". Inona no atao hoe Pentest?
Ahoana ny fomba fanamboarana ny Distro GNU / Linux amin'ny sehatry ny IT amin'ny fanapahana sy ny Pentest?
GNU / Distros Linux ho an'ny fanapahana sy ny fiompiana an-tsokosoko
Mazava ho azy fa marobe izao GNU / Distros Linux natokana manokana ho an'ny Sehatra IT do ny fanapahana ary ny pentesting, toy ny:
Kali: Miorina amin'ny Debian -> https://www.kali.org/
Parrot: Miorina amin'ny Debian -> https://www.parrotlinux.org/
BackBox: Miorina amin'ny Ubuntu -> https://www.backbox.org/
Caine: Miorina amin'ny Ubuntu -> https://www.caine-live.net/
Demon: Miorina amin'ny Debian -> https://www.demonlinux.com/
Bugtraq: Miorina amin'ny Ubuntu, Debian ary OpenSUSE -> http://www.bugtraq-apps.com/
ArchStrike: Miorina amin'ny Arch -> https://archstrike.org/
BlackArch: Miorina amin'ny Arch -> https://blackarch.org/
Pentoo: Miorina amin'ny Gentoo -> https://www.pentoo.ch/
Fedora Security Lab: Miorina amin'ny Fedora -> https://pagure.io/security-lab
WiFisLax: Miorina amin'ny Slackware -> https://www.wifislax.com/
DracOS: Miorina amin'ny mifototra amin'ny LFS (Linux avy amin'ny Scratch) -> https://dracos-linux.org/
Rafitra fanandramana tranonkala Samurai: Miorina amin'ny Ubuntu -> https://github.com/SamuraiWTF/samuraiwtf
Fitaovana fiarovana ny tambajotra: Miorina amin'ny Fedora -> https://sourceforge.net/projects/nst/files/
LALINA: Miorina amin'ny Ubuntu -> http://na.mirror.garr.it/mirrors/deft/
Fiarovana ny tongolo: Miorina amin'ny Ubuntu -> https://securityonion.net/
Santoku: Miorina amin'ny LFS miorina -> https://santoku-linux.com/
Tetikasa hafoina hafa: SpyRock, Beini, XiaopanOS, Hacking mivantana, Blackbuntu, STD, NodeZero, Matriux, Ubnhd2, ary PHLAK.
Manafatra GNU / Linux Distros Repositories ho an'ny hacking sy Pentesting
Na izany aza, maro amintsika no mampiasa GNU / Distros Linux reny na nentim-paharazana mivantana, toy ny Debian, Ubuntu, Arch, Gentoo na Fedora, ary tsy maintsy mametraka fotsiny ny Fampiharana hacking sy Pentesting amin'ny alàlan'ny Mpitantana fonosana tafiditra.
Ary satria maro amin'ireo toeram-pivarotana nentin-drazana no tsy ahitana ny fitaovana feno na ny vanim-potoana farany manan-kery, dia mijanona ho antsika ny mampiditra ireo tahiry ao amin'ny GNU / Distros Linux fandaharana manokana mitovy amin'ny antsika, izany hoe raha mampiasa GNU / Linux Debian tsy maintsy manafatra ny trano fitahirizam-bokin'ny Kali sy Parrot, ohatra, hametraka azy ireo avy eo. Mazava ho azy, ny fanajana ireo kinova fonosin'ny GNU / Linux Debian miaraka amin'ireo Distros manam-pahaizana manokana ireo hisorohana ny vaky fonosana tsy azo ovaina na ny Operating System iray manontolo.
Manafatra ny Kali repositories amin'ny Debian ity fomba manaraka ity dia tokony hatao:
Ampidiro ao anaty rakitra na lisitra .list anao, toerana fitahirizana sahaza an'i Distro, ary anisan'ireto ireto manaraka ireto:
Ampio ireo lakilem-bidy nangatahana avy amin'ny trano fitahirizana ka mampiasa ireto baiko manaraka ireto:
Manafatra ny Tahiry parrot amin'ny Debian ity fomba manaraka ity dia tokony hatao:
Aorian'izany dia tsy mila mametraka ny fantatsika, ny tiantsika ary ny havaozina indrindra fotsiny isika Fampiharana hacking sy Pentesting amin'ireto trano fitahirizana ireto, mitandrina tsara mba tsy hamaky ny anay Debian GNU / Linux Operating System. Ho an'ny sisa amin'ny GNU / Distros Linux ny reny na ny nentin-drazana, dia tokony hatao toy izany koa ny mitovy aminy, toy ny amin'ny andohalambo manaraka ny ohatra manaraka amin'ny BlackArch.
Satria, raha tsy izany, ny safidy farany dia ny misintona, manangona ary mametraka an'ny fitaovana tsirairay Fijirihana sy Pentestana misaraka amin'ireo tranokala ofisialin'izy ireo, izay atolotra indraindray. Ary raha misy tsy mahalala izay fitaovana Fijirihana sy Pentestana mety ho fantatra sy hametraka dia azonao atao ny manindry ity manaraka ity rohy manomboka. Na dia misy ihany koa ny mety tsotra fametrahana «Fsociety: fonosana fitaovana hacking tena tsara".
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «¿Cómo adaptar nuestras Distros GNU/Linux al ámbito TI del Hacking y el Pentesting?», ny fikarohana ireo fomba na fomba hafa isan-karazany, toy ny fametrahana mivantana ny rindranasa avy amin'ny trano fitahirizana azy na ivelany, na ny fampiasana fampiharana tsy miankina misy, dia tena mahaliana sy mahasoa, ho an'ny iray manontolo «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fijirihana sy Pentestana: Ampifanaraho amin'ity sehatra IT ity ny GNU / Linux Distro-nao
fedorian21 dia hoy izy:
Ho an'ireo mpampiasa Fedora / Centos / RHL, satria i Fedora dia mitazona fihodinana antsoina hoe Security Lab, azonao atao ny misintona azy avy https://labs.fedoraproject.org/en/security/
Tsy dia feno toa an'i Kali izy io fa manana fitaovana kely vitsivitsy.
na raha efa mampiasa Fedora ianao dia apetraho amin'ny terminal miaraka aminy
na avy amin'ny centos manafatra ireo repo.
Valiny tamin'i fedoriano21
Miarahaba anao Fedoriano21. Fandraisana anjara tena tsara, misaotra anao tamin'ny hevitrao.
CWM, DWM, Fanazavana, EvilWM, ary EXWM: WM hafa 5 ho an'ny Linux